Welcome To Morn RaZaGree: April 2010
”.....ဝါကြိတ်သံကို၊ ငိုသံထင်မှတ်၊ မိုးတိမ်ယံကို၊ မပျံတက်ကေ၊ ထွီးနတ်ကေသျှင်မ၊ ပုလဲထံကေ၊ ဝဲပျံကျကေ၊ သားလှရွီကျူ၊ သဇင်ဖြူကေ၊ ကြင်သူမငို၊ မြပုခွက်မှာ၊ သာခြင်း ဆိုကေ၊ သားသျှင်အိပ်ကြောင်း၊ တစ်ပျောင်းပျောင်းကေ၊ ချိုညောင်းသာကြည်၊ မြဧယင်မှာ၊ အမင်သိပ်ကေ၊ အိပ်ပါလေ။ ”
မေထက် အက္ခရာ၊ သင်္ဂါယနာ၊
ဝါဒတူညီ၊ တို့သိင်္ဂီကား၊ ပဉ္စမီထပ်၊
နိဗ္ဗူ ဆုတောင်း ပြည့်အံ့တည်း။“
သီလာနိ ကုလာဝံသာနိ ဝါရက္ခ န္တီတိ ရခိုင်။
သီလာနိဝါ ငါးပါးသီလ အစရှိသော
ကုလာဝံသာနိဝါ မိမိတို့ မျိုးရိုးမျိုးနွယ်ကိုလည်းကောင်း။
သတ္တိထူးကြောင်း ရခိုင် ရခိုင်မည်၏။
”ဧ..ဧလည်း ဧတုံ တစုံမက်မက်၊ ခေါ်ခိုက်ခတ်လျက်၊ ဆက်ဆက်လွလေ၊ အထွေထွေတည့်၊ မရွီနိူင်ဘဲ၊ ဝမ်းလျင်ကွဲမျှ၊ သဲထဲပူပန်၊ ဝှန်တုန်ကြက်သီး၊ ဘေးကြီးဘေးလျှင်၊ ပျင်မျှပြည့်လှိုင်၊ အဆိုင်ဆိုင်တည့်၊ ရခိုင်မည်သာ၊ မဟာသမတ၊ ခတ္ထိယဧ့ ဆက်မှတသွယ်၊ အနွယ်ကိုပ၊
နီလပုံစင်း၊ ထွန်းပလျှင်းဟု၊ သတင်းစကား၊ နာသာများနန့်၊ ထံပါးကသော်၊ သားကိုဖျော်၍၊ မယ်တော်သျှင်မ၊ ကျူးပါကလျှင်း”
“The Rukheng race is admitted to be of the same racial stock as the Burmas or Birmans, and is understood to have greatly preceded that nation in civilization. The Burmas, indeed, derive their own origin from the Rukheng, whom they generally dominate Burma Kyi, or the great Barmas, and they consider the Rukheng as the most ancient and original dialect of the Burma Language.” (Leyden. J: On the language and Literature of the Indo-China Nations) ASIATIC RESEARCHERS, Vol. X, 1811)
အေဒီ ၄ ရာစု မှ ၆ ရာစု ရခိုင်ပြည်သုံးအက္ခရာ
“ ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကိုမချစ်ရေလူသည် မည်သည့်အရာကိုလေ့ချစ်တတ်ဖို့မဟုတ်။ ”
“ ငါသည်မိမိနိရေနိရာကိုဂုဏ်ယူရေ လူကိုရာ မြင်ချင်ရေ။ ငါသည် မိမိနိရေနိရာက ဂုဏ်ယူရေလူကိုပဲမြင်ချင်ရေ။ ”
“ ဆင်းရဲရေလူတိကို ကူညီဖို့အကာင်းဆုံးနည်းသည် သူရို့၏ရပိုင်ခွင့်ကိုပီးခြင်းဖြစ်တေ။ ”
“ အလကားရရေ အစာဆိုစွာ ကြွက်ထောင်ချောက်မှာရာ ဟိရေ။”
“ အပြစ်ဟိရေလူကို စေတနာထားစွာယေ အပြစ်ကင်းစင်ရေလူကို စော်ကားစွာနန့်တတူဗျာလ်။”
“ သင့်ကိုသင့်တိုင်းပြည်ကဇာလုပ်ပီးနိူင်လဲ ဆိုစွာထက် သင်ကသင့်တိုင်းပြည်ကို ဇာလုပ်ပီးနိူင်လဲအယင်မီးပါ။ ”
ရခိုင် ဆိုစွာ ဇာလဲ?
Find more videos like this on The Arakanese Meeting Point
ရခိုင်စာပီ နန့် ပတ်သက်တေ စာအုပ်၊ စာတမ်း နန့် ဆောင်းပါးတိ
() အေဒီခြောက်ရာစု နန့် ယင်းမတိုင်မီ ရခိုင်ပြည်သုံး အက္ခရာများ(ဥူးစံသာအောင်)
() ရခိုင်စာပီခရီး (အသျှင်ကောသလ္လ (ဂေဝသီ))
() ရခိုင်အက္ခရာ ဆင်းသက်ရာ (အသျှင်စက္ကိန္ဒ)
() ရခိုင်အက္ခရာ စာပီခရီးလမ်းကြောင်း (အသျှင်စက္ကိန္ဒ)
() ရခိုင်သင်ပုန်းကြီး ရွတ်ဖတ်နည်း (အသျှင်စက္ကိန္ဒ)
() အက္ခရာအကြောင်းဟောပြောချက် (အသျှင်စက္ကိန္ဒ)
() လောကသာရ အဖျား (ရခိုင်သူမြတ်)
() လောကသာရဆုံးမစာ (ရခိုင်သူမြတ်)
() ရခိုင်ကျောက်စာ၊ ပီစာ၊ ပုရပိုက်စာ၊ ခေါင်းလောင်းစာ၊ နန့် အခြားစာပီမူတိ
() ဂဝိန္ဓကျမ်း (ရခိုင်ဝေသာလီခေတ်တွင်သက္ကတဘာသာမှ ရခိုင်ဘာသာသို့ပြန်ဆိုအသုံးပြုခသောကဗျာ၊လင်္ကာဆိုင်ရာသဒ္ဒါကျမ်း)
() မြန်မာမူပြုမရသော ရခိုင်ကာရံများ (စ/ဆုံး)
() ရခိုင်ရွီပီ ကြိုးစာ
() ရခိုင်စာပီမူ (ပါမောက္ခ ဒေါက်တာအေးကျော်)
() ရခိုင်စာပီ မဂ္ဂဇိင်း-၁
() ကိုသာလှဥူး ၏ စုစည်းမူများ
() သျှစ်သောင်းဘုရားသံထီးတင် ရခိုင်သံချပ်ကြီး
() ဗမာ-အောက်သား နန့် မြန်မာစာ
() အက္ခရာ နန့် စာ
() လောကသာရပျို့ နန့် ရခိုင်စာပီ (ဝေဖန်ချက်)
() " လား " " လာ " ကိစ္စ (ရခိုင်သဒ္ဒါ)
() အဒူမင်းညို (ရခိုင်မင်းသမီးဧချင်း)
() မဟာပညာကျော် (ရခိုင်ရာဇဝင်ဇတ်လမ်း)
() ရခိုင်မဂ္ဂဇိင်း အမှတ်(၁)
() သုဝဏ္ဏဒေဝီ၏ သျွှန်းလိုက်ရတုပိုဒ်စုံ
() ရခိုင်အက္ခရာပေါ်ပေါက်လာပုံ နန့် အသွင်ပြောင်းလာပုံ
() ရခိုင်စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံအညွန်း (စုစည်းမူ)(ရင်သွီးငယ်)
() ရခိုင်စာပီဆိုင်ရာအင်တာဗျူး (ဒေါက်တာအေကျော်)
() တိမ်မြုပ်နီရေ ရခိုင်စာပီးများ(ဥူးသာညွန့်)
() စံ ရခိုင်စာပီ ပန်းတိုင်းကို လားရောက်ခြင်း (ဆောင်းပါး)
() ရခိုင်ဝေါဟာရ တိုင်ပင်ပွဲ (သန္တာမောင်မောင်)
() ရခိုင်စာပီဟောင်းများဖော်ထုတ်ရီး၊ သုတေသနလုပ်ငန်းများလုပ်ကတ်ပါ။ (အသျှင်စက္ကိန္ဒ)
() ရခိုင်စကား၊ ရခိုင်စာ (မောင်စံဖော်)
() ရခိုင်စကားကို ဘာသာစကားသုတေသီတို့ ယူဆချက် (အသျှင်ကြီး)
() မြောက်ဥူးခေတ်လယ် ရခိုင်စာရွီးဟန် သုံးမျိုး (မောင်ဗသိန်း)
() မတူညီရေ အယူအချက်ကြားက ရခိုင်စာပီ၏ ကံကြမ္မာ (မိုးညို)
() ရခိုင်စာပီ ဟြင်သန်ဘာဇီ
() နိူင်ငံတကာရီးရာ ရခိုင်သတင်းစဉ် (အမှတ် ၇)
() ရခိုင်စာ နန့် ရခိုင်စကား ရီးသားပုံသျှင်းလင်းချက်
() ရခိုင်သင်ပုန်းကြီးဖတ်စာ (အမှာစာ)(အသစ်!)
() ရခိုင်သင်ပုန်းကြီးဖတ်စာ (သင်ရိုး)(အသစ်!)
ရခိုင်သမိုင်း နန့် ပတ်သက်တေ အကြောင်းအရာတိ
() ရခိုင်ရာဇဝင်သစ်ကျမ်း ၁ (မှတ်စု)
() ရခိုင်ရာဇဝင်သစ်ကျမ်း ၂ (မှတ်စု)
() ရခိုင်ရာဇဝင်သစ်ကျမ်း (ဒုတိယအုပ်)
() ရခိုင်သမိုင်းကွင်းဆက်များကို ဆက်စပ်ကြည့်ခြင်း
() ရခိုင်တန်ဆောင် ဆောင်းပါးများ (ဥူးဥူးသာထွန်း)
() သီရိလင်္ကာ နန့် ဗုဒ္ဓဘာသာ
() ရှိအတိတ်ကာ ဓညဝတီရခိုင်ပြည် နန်းဆက်မင်းဆက်ရာဇဝင်
() ရခိုင်၊ မြန်မာ မင်းနှစ်ပါးရို့၏ ရာဇသံ
() ရခိုင်ရို့အားဖိနှိပ်ခရေဗမာ(မြန်မာ) မြို့ဝန်များ
() တတိယမြောက်ဥူးခေတ်အလယ်ပိုင်ရှိဟောင်းငွီသားဒင်္ဂါးများ (ဥူးဥူးသာထွန်း)
() ရခိုင်ဖေသာများ (ဒင်္ဂါးများ)
() ဥူးဥတ္တမ နန့် ဒိုင်အာခီအုပ်ချူပ်ရီး
() ဥူးပေါ်ဥူး ၏ စကားအလင်္ကာ
() A political Analysis (Series 1)
() AFPFA (Series 2)
() Bo Gree Kra Hla Aung (Series 3)
() The Third Dimension of 8-8-88 ( Series 4)
() The Strategies and Tactics After 8-8-88 (Series 5)
() The Struggle of Hidden Colony and Globalization (Series 6)
() The Prisoner of Mandalay and Democracy Part I (Series 7)
() The Prisoner of Mandalay and Democracy Part II (Series 8)
() The People's Republic of Arakan and Her Concept I (Series 9)
() The People's Republic of Arakan and Her Concept II (Series 10)
() The Arakan Republic and Decolonization of Burma (Series 11)
() An Outlet of the Arakanese Rule in Southeast Bengal During
16th and 17th Century AD
() Buddhist Kings with Muslim Title
() Rock Art and Artisans in Lemro Valley, Arakan
() Literature on the Mrauk-U Period in Arakanese History
() The Remote Mysteries of Mraunk-U
() Thesis on Arakan Chapter 1
() Thesis on Arakan Chapter 2
() Thesis on Arakan Chapter 3
() Thesis on Arakan Chapter 4
() Thesis on Arakan Chapter 5
() Arakan (Fochhammer 1891)
() Ancient Arakan (Gutman, Pamela)
() Crisis and Reformation in the Kingdom of Arakan
() Dom Martin By Maurice Collis and San Shwe Bu
() Changes in Spirits Cults in Arakan
() Arakan, Morn RaZaGree and Portuguese
() Arakan Eighty Years Ago
() A Study of Arakan’s Subjection in Nineteenth-Century
() Arakan King's Letter to Dutch King
() Rakhaing New Historical Journal
() Vaishali and the Indianization of Arakan
() A Dicussion of Muslim Influence in Mrauk_U Period(Dr.Jacques)
() Rediscovering Arakan (Dr.Jacques)
() The Land of Historic Finds by U Shwe Zan
() History of Mahamuni Image
() The Story of Mahamuni
() Mahamuni Tradition
() The Land of Great Image (Maurice Collis)
() Arakan - A Promised Land
() History of Arakan
() Arakan: Past, Present and Future (John Ogilvy Hay)
() Arakan and First Anglo Burmese War
() Interpretations of Burmese World Part I
() The Serpent and The King
() The Rise and The Fall of Arakan Kingdom
() A Buddhist Land of Rakhaing
() How Mrauk-U was translated into Monkey's egg
() The Forgotten Cities of Arakan
() Marma (The Arakanese)
() Ancient Arakan
() Old Arakan (U San Shwe Bu)
() ရခိုင်သမိုင်း နန့် သံသယများ (ဥူးရွီစံ)
() Notes on Arakan
() PhD. Thesis on Arakan
() Stephans's Thesis on Arakan
() Arkanese Poem of 16th Century
() Arakanese Proverbs in Comparison with their counterparts in Burmese
() Buddhist Art of Ancient Arakan
() THE MAGHS
() So-called Rohingya and Rakhaing
() Influx Virus (1)
() Illegal Migration into Assam from Bangladesh
() Illegal Kular Problem in Arakan
() On the Evolution of Rohingya problem in Rakhine State of Burma I
() My Views on Rohingya
() False Rohingya History
() On the Evolution of Rohingya Problem in Arakan State
() The Developement of Muslim Enclavement
() Rohingya And Migrated People in Arakan
() Response to Muslim Press Release the Rohingyas
() (Mis)Interpretation of Burmese Words Kula
() Identities of The Rakhaing Community (Maung Than Aye)
() Interview with guest Editor Stephan Van Galen
() Political Success ofaBuddhist Boarder States (Dr.Jucques)
() The Rohingyas, Who are they?
() Burmese Responses to Indian Immigration 1
() Burmese Responses to Indian Immigration 2
() An Historian Looks at Rohingya (Dr.Aye Kyaw)
() Background of Rohingya Problem (Kyaw Zan Tha,MA)
() မဟာတော်ဝင် ရခိုင်ဘုရင်မျိုးနွယ်တော်များ
() ဒဏ္ဏာရီထဲ့က သမိုင်းရှာပုံတော်များ
() သူ့ကျွန်မခံဇာတိမာန်နန့် (မနူဿဥူးဘစိန်)
() ရခိုင်နယ်နမိတ် (ဥူးဘစံ)
() ဂုဏ်ယူပါလီ ဓညဝတီ
() သူ့ကျွန်မခံဇာတိမာန်နန့်-၁၉၇၉ (မနူဿဥူးဘစိန်)
() Burma or Myanmar
() ကိုလိုနီဘဝ ရွှီပြည်ရခိုင် (မြထွန်းအောင်)
() ရခိုင်ရိုးရာသင်္ကြန်နန့် သမိုင်းနောက်ခံ
() ရခိုင်ဘုရင်တိအုပ်ချုပ်ကာလ အဝီးရောက်ရခိုင်လူမျိုးတိ ဖြစ်စိုင်များ(အသစ်!)
() ဟင်္သာစီမံချက် (လျှိုဝှက်)(အသစ်!)
() ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းသို့ နိူင်ငံခြားသားဘင်္ဂလီများ ခိုးဝင်လွှမ်းမိုးမူ (ရခိုင်ပြည်နယ်တရားသူကြီး အဖွဲ့ဝင်ဥက္ကဌ)(အသစ်!)
() Northern Arakan District by GRANT BROWN(အသစ်!)
() ဘင်္ဂလီ နိူင်ငံခြားသားများဝင်ရောက်လာမူ-ဗိုလ်မှူးလှမြိုင် (လျှို့ဝှက်)(အသစ်!)
() ရိုဟင်ဂျာအမည်ခံ ဘင်္ဂလီများ နိန်ရပ်မှတိုးတက်ပြောင်းလဲလာမူ(အသစ်!)
ရခိုင်စာပီ နန့် ပတ်သက်တေ ဝတ္ထု၊ ကဗျာ တိ
() ပြုံးသိပြုံးသွင် ရခိုင်ကာတွန်း (တက်သစ်အောင်)
() ဘဝပီးသင်္ခန်းစာ ဝတ္ထု
() မဟာပညာကျော် (ရခိုင်ရာဇဝင် ဗွီဒီယိုဇတ်လမ်း)
() မုဒိတာစမ်းရီအိုင် (ဝတ္ထု)
() ကျားချေ နန့် နွားချေ ဝတ္ထု
() တောင်သမင် နန့် အဂြို
() အေနိ နန့် နက်ဖန်
() မိုးသောက်ရောင်နီကဗျာ (၂)
() ရွာတော်က ကဗျာတပုဒ်
() သဇင်တစ်ခက် ရာဇဝင် (မျိုးသာဂီ)
() အပြောင်းအလဲ (ကိုကျော်ဝင်းခိုင်)
() နောင်လာဖို့ ၂၀၅၀ ကိုမျှော်ကြည့်ကတ် (အဆိုးချေ)
() ကြာညိုပါးက ပီးစာ-၁ (အဆိုးချေ)
() သင့်အကျင့်နန့် သင့်ပုံသွန်းဗျာလ်
() အောင်မြင်ဖို့ ဥပဒေ ၅ ခု
ဆောင်းပါး နန့် အိန်တာဗျူးတိ
() နယ်ချဲ့ရို့ကိုတော်လှန်ခရေ ဆရာတော်အသျှင် ဥူးဥတ္တမ
() ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိူင်ငံ၏ ပထမဆုံးအာဇာနည်နိန့်
() ရခိုင်ပြည်ကို ရခိုင်တိအုပ်ချူပ်ချင်လို့ (အိန်တာဗျူး ၁)
() ၂၀၁၀ ရွီးကောက်ပွဲ ရခိုင့်နိူင်ငံရီးအတွေးအခေါ်အယူအဆများ(အိန်တာဗျူး ၂)
() အာသျှနီဝန် အာဇာနည် ဆရာတော် အသျှင်ဥူးဥတ္တမ
() ပြည်ထောင်စု၏ ဗိသုကာ (သို့) လွတ်လပ်ရီး ဗိသုကာ
() ၂၀၁၀ ရွီးကောက်ပွဲက ရခိုင်ပြည်သူအတွက် ဇာတိပီးနိူင်လဲ?
() အသျှင်နာဂန္ဒိမော်ကွန်းကို စိန်ခေါ်လိုက်စွာဖြစ်တေ
() အန္ဒမန်-နီကိုဘာ ခေါ် ကပလီကျွန်းမှပီးစာ
() သြတ်ဂတ်စ်(၁၃)ဆန်ပြသနာနိန့်တွင်ကိုယ်တွိပါဝင်ခသူနန့် အိန်တာဗျူး
() Arakan Shwe Gas
() (လူမျိုးငယ်) အတ္တဝါဒီများကျဆုံးခန်း
() ရခိုင့်အာဇာနီ(ALP) ဥက္ကဌကြီး နန့် မိုးလင်းရာဇာစစ်ကြောင်း
() ၁၃ သြဂတ်စ်မမိအပ်
() ရက္ခိတရို့ပစ္စက္ခပျံကျလူ့ဘောင် နန့် အနာဂတ်ကောက်ကြောင်း
() ကျွန်သက် ၂၂၁ နှစ်ကြာပြီးနောက်
() ရခိုင်လူ့အဖွဲ့အစည်း၏အမျိုးသာလှုပ်ရှားမူ နန့် ပြည်ထောင်စုအရီး
() မေ့အတွက်မငိုယှိုက်လီကေ့ ဓညဝတီ
() Land Confiscation-Overview-in-Arakan-by-AASYC
() ထေရဝါဒသာသနာရခိုင်ပြည်တွင်ထွန်းကားလာပုံ (ဥူးဥူးသာထွန်း)
() ဥူးဥူးသာထွန်း၏သမိုင်းဝင်မိန့်ခွန်းများ (၁)
() ဥူးဥူးသာထွန်း၏သမိုင်းဝင်မိန့်ခွန်းများ (၂)
() ဥူးဥူးသာထွန်း၏သမိုင်းဝင်မိန့်ခွန်းများ (၃)
() Arakanese Nationalism and the Struggle for National self- determination(An overview of Arakanese political history up to 1988)
() နအဖ၏ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရီး
() စစ်တွေ ဘုန်းကြီး တိကနအဖတိုင်းမှူး ဘားကိုပီးစာ
() ထလေ့ ရခိုင်....ရခိုင် ထလော့...
() ညီချေသို့ ပီးစာ ၁ က ၁၅ ထိ (ကိုကျော်ဝင်းခိုင်)
() ပြည်ထောင်စုသမိုင်းမှန် သင်ကြားရီးအတွက်(အိန်တာဗျူး)
() စစ်မှန်သောပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရီး ဗမာလူမျိုးစု ဇာတိလုပ်သင့် (အိန်တာဗျူး)
() မြောက်ဥူးကဘလူး ဆောင်းပါးများ
() မြန်မာနိူင်ငံ ရခိုင်းအမျိုးသားပါတီ၏ သဘောထား
() ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတိုးတက်ရီးပါတီ၏ သဘောထား
() ကမန်အမျိုးသားတိုးတက်ရီးပါတီ၏ မူဝါဒ
() မြို (ခေါ်) ခမီးပါတီ၏မူဝါဒ
() Voices from Inside (Ethnics speak)
() ရွီးကောက်ပွဲအကြိုကာလ ရခိုင်ပြည်နိူင်ငံရီး ဇာတ်ခုံထက်ကမြင်းကွင်းတိ
() တိမ်ကောလာသော ရခိုင်ရိုးရာလက်မူ ရက်ကန်းပညာ
() ဒုတိယပင်လုံမှသည်အနားဂတ်ပြည်ထောင်စုသို့ (၁)
() ဒုတိယပင်လုံမှသည်အနားဂတ်ပြည်ထောင်စုသို့ (၂ + ၃)
() ကာလကတ္တားအကျဉ်ထောင်မှ ပီးစာ
() ရခိုင်ပြည် လွတ်လပ်ရီး လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲ (ဆောင်းပါး)
() သမိုင်းကိုပျောက်အောင် မဖျောက်ဖို့လိုရေ။ (ဆောင်းပါး)
() ခွဲထွက်ချင်ရေ စိုးရိမ်မူကို ဇာပိုင်ပြောင်းဖို့လဲ?(ဆောင်းပါး)
() ရခိုင့်သွီးမျက်ရည်နိန့် အတွက် ခိုင်အောင်ကျော်၏ သဝဏ်လွာ
() (၂၂၆) နှစ်မြောက် ရခိုင့်အချုပ်အခြာအဏာကျဆုံးခြင်း ဝမ်းနည်းအောက်မေ့ဖွယ် အထိမ်းအမှတ်
() အမျိုးကိုချစ်စွာလား? အမျိုးကိုနှစ်စွာလား? (သန်းဝင်း)
() သန်းဝင်း ဆိုသူသို့ အိပ်ဖွင့်ပီးစာ (ဆောင်းပါးရှင်-မင်းစိုးအိမ်)
() မောင်းသန်းဝင်း ဖတ်ဖို့ (ဆောင်းပါးရှင်-ခိုင်မင်းခိုင်)
() သမိုင်းကိုအမှန်သိလို့ အမှန်ကိုလက်ခံပြောဆိုကတ်ရမေ။
() ဝါရင့်သံတမန် ဥူးခင်မောင်ကြည် နန့် တွိဆုံဆွေးနွေးခန်း
() ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ် (ဥူးအေးသာအောင်)
() အခြားမဲ့မှ တပါးအခြားမဟိဗျာလ် (ခိုင်အောင်ကျော်)
() ပြည်ထောင်စုနိန် (ဆရာကြီး ဒေါက်တာအေးကျော်)
() ကိုယ်တွိမေယုမြီ (စံထွန်းအောင်)
() ရခိုင်တော်လှန်ရီး ဂေါင်းဆောင်တိ ဘားကို အိပ်ဖွင့်ပီးစာ(အောင်ရဲလင်း)
() ပင်လုံ မာ ယုံခလို့ (ခိုင်အောင်ကျော်-ဆောင်းပါး)
() ရခိုင်ကျောင်းသား စိန်ထွန်းခိုင် အရီးကိစ္စ (၁၉၇၉)
() ကိုလိုနီစနစ် ဖျက်သိမ်းရီး နန့် အမျိုးသားရီးတာဝန်
() ကျင်အားကစားကိုယ်ခံအားလို (ဝေသာ)
() ရခိုင့်မြီကို ရခိုင်မပိုင်
() မေဃမြီမှ ချစ်စရာဓလေ့မွန်များ (ညီလတ်ထွီး)
() လရတတ်နာင့် လမွဲနိူင်ငံများ
() The Burma We Love (Dr.Aye Kyaw)
() ရခိုင်ပြည်က မရဏ ရထားလမ်း
() ဆိုင်ကလုံး ဂိရိဧ့ ဒဏ်ခတ်သံ
() ဗုံးကွဲစွာ နန့် ပတ်သက်လို့ ရခိုင်မျိုးဆက်သစ်ကွန်ယက်ဧ့ထုတ်ပြန်ကြော်ငြာချက်
() နိူင်ငံတကာရေးရာ ရခိုင်သတင်းစဉ် (အမှတ်-၃)
() ဗမာ့(မြန်မာ့) စစ်ဝါဒီအောက်မှ လူမျိုးများ နန့် ဗုဒ္ဓသာသနာ
() ဗမာ့(မြန်မာ့) စစ်ဝါဒီအောက်မှ လူမျိုး နန့် ဗုဒ္ဓသာသနာ (၁+၂+၃)
() ရခိုင်သတင်းစဉ် (သြဂတ်စ်)
() ရခိုင်သဟာယ အသင်းကြီး
() ဝံလဝါဒ နန့် ရခိုင်ရို့လက်တွိနိူင်ငံရီးလမ်းစိုင် (မောင်ဥူးကဘီလူး)
() ရခိုင်စာ အရွီးအသားပြဿနာ
() ရတပ ပါတီ အထွေထွေ အတွင်းရီးမှူး(ဥူးလှစောနန့် အိန်တာဗျူး)
() ရခိုင်စာပီဥက္ကဌ ဒေါက်တာကျော်သိန်းသို့အိပ်ဖွင့်ပီးစာ
() နိူင်ငံတကာရီးရာ ရက္ခိုင်သတင်းစဉ် (အမှတ်-၅ မေလ)
() လေးဝတီ နန့် လေးကိုင်းသဏ္ဌာန်မြီ (ဆောင်းပါး)
() ကျွှန်တော့်မာ အိပ်မက်တစ်ခုဟိပါရေ။ (ဆောင်းပါး)
() အောက်သားလောင်းရိပ် အောက်က ရခိုင်နာမေတိ
() ဇာဗမာခေါင်းဆောင်က ရခိုင်တိအရီးကို အလီးပီးစဉ်းစားခလဲ? (ဆောင်းပါး)
() ငါရို့ခေတ်ကိုတော ရောက်ရမည် ဧကန်မလွဲပါ။ (ဆောင်းပါး)
() ဒေါက်တာ အေးကျော်နန့် အင်တာဗျူး (အိန်တာဗျူး)
() ရခိုင်တစ်ကျပ်၊ ဗမာတစ်ကျပ်၊ ရှမ်းတစ်ကျပ်
() ဒုတိယအကြိမ် မျက်ရည်ကျရသူ စန္ဒသူရိယ (ခိုင်အောင်ကျော်-နယူးယောက်)
() နာကြင်မူထဲ့က ဆုတောင်းသံ (ခိုင်အောင်ကျော်-နယူးယောက်)
() ရခိုင်အမျိုးသားနိူင်ငံရီး (ညီညီလွင်)
() ပြည်ထဲရီးဝန်ကြီးဟောင်း မောင်ဥူး ရခိုင်လူထုကို ဇာတိပြောခလဲ
() ရခိုင်အမတ်သုံးဥူး အမူရုံးရရေကိစ္စ (အိန်တာဗျူး)
() မျိုးစောင့်တရား (ငချွန်းယေ)
() ရှားပါးဆင်ဖြူ ဗမာပြည်ကို မယူစီချင်
() အသိဥဏ်ကို မျိုးစိချခြင်း
() ပြတိုက်ထဲ့က ဖောက်ထွင်းပနာ
() သမ္မတဥူးသိန်းစိန်ကို ဒေပိုင်ပြောချင်ပါရေ။
() သြတ်ဂစ် ၁၃ ဆန်ပြဿနာနိန် အရီးအခင်းဖြစ်ရပ်မှန်သမိုင်း
() ရခိုင်နိူင်ငံသားစိတ်ဓာတ် (ဒေါက်တာအေးကျော်)
() ရခိုင်ဆိုစွာ အမျိုးကိုချစ်တေ အတွက်ကြောင့်
() ဝီဒနာကို ကနေဒါမှာ ကြီညာခရလီယင့်လား
() DVB သူခိုးကြီး ဟန်ညောင်ဝေနန့် ရခိုင်လူမျိုးပြသနာ(အသစ်!)
() ဆရာတော် သျှင်ဥတ္တမ
() ဆရာတော် ဥူးစိန္တာ
() ဆရာတော် ဘဒ္ဒ န္တ စန္ဒြမဏိ
() ဆရာကြီး ဥူးလုံး>
Posted by မျိုးသာဂီ at 12:21 AM0comments
ရခိုင်စာ နန် ရခိုင်စကား ရွီးသားပုံ့ သျှင်းလင်းချက်
Posted by မျိုးသာဂီ at 2:56 AM0comments
ရခိုင်နန့်ပတ်သက်တေ E-book တိပို့
ချင်ပါကေ ဒေလိပ်စာကို ပို့ပီးကတ်ပါ။
ရခိုင်စာပီ (အသံဖိုင်)- ဆောင်းပါးသျှင်မေဃ
စာပီရေ လူမျိုးဧ အသက်သွီးကြော (ဒေါက်တာအေးကျော်)
အိန္ဒိယ ဗြဟ္မီ အက္ခရာ
ရခိုင်ဝေသာလီ စောပိုင်း အက္ခရာ
ရခိုင်ဝေသာလီ နှောင်းပိုင်း အက္ခရာ
ဒေါ်လာလှိုင်းပုတ် ၊ တလှုပ်လှုပ် နန့်
ဥပေက္ခာ ပြုလားခဂတ်စော်လဲ မကန်မကန်.....
ပင်လီပင်စွပ် စွန့်ပစ်ခရေ ခရုခွံပိုင်
အဆံကျွတ် အခွံလွတ် ကြံဖတ်ဘ၀က
ရခိုင်ရိုးရာ ဆံထုံးနည်း တချို့
Visit Arakanese Meeting Point
Myo Tha Gee
ရခိုင်စာ နန် ရခိုင်စကား ရွီးသားပုံ့ သျှင်းလင်းချက်...